ပုညဒေါ်စေတီတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← မင်းကွန်း Pahtodawgyi စေတီတော်
Hsinbyume စေတီတော် →
မင်းကွန်းကမ်းခြေမှာသင့်ကူးတို့စီးကနေစတင်သင်ပထမဦးဆုံးမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်ရပါလိမ့်မယ်, ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည် 5,000K. သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ရဖို့ပြီးနောက်ရပ်တန့်ဖို့ကပထမနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည် ပုညဒေါ်စေတီတော်.
ပုညဒေါ်စေတီတော်, တွင် 15 ခြေဘဝါးရှည်, ကချောခဲ့ကဲ့သို့အနီးအနား 150m အရပ်ရှည်ရှည်မင်းကွန်း Pahtodawgyi ကြည့်မယ်လို့အရာကိုသေးငယ်တဲ့အကြေးခွံပုံတူမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာတစ်ဝှမ်း built ခဲ့ကြလိမ့်မယ် 1799 ဗိမာနျတျောဗိသုကာတစ်ဦးအလုပ်လုပ်မော်ဒယ်အဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့.
ပုညဒေါ်စေတီတော်မှာကြည့်ဖို့အများကြီးမရှိစဉ်မှာသင်မင်းကွန်း Pahtodawgyi ပါပြီမယ်လို့ပဲဘယ်လောက်ကြီးမား၏အမှန်တကယ်နျဖိုးထားရနိုင်. အဆိုပါပုံတူ မှစ. သင်ကစတုရန်းအခြေစိုက်စခန်းအပိုင်းတပြင်လုံးကိုဗိမာနျတျော၏အမြင့်၏ခန့်သာသုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါသည်တွေ့နိုင်ပါသည်. သင်လမ်းပေါ်တက်ထပ်မံသွားနှင့်အစစ်အမှန်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ပုံကိုမြင်သောအခါသင်တပြင်လုံးကိုအရာဖြစ်ရပြီလို့ကိုဘယ်လောက်အရပ်ရှည်ရှည်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာရိုးရှင်းစွာတုန်လှုပ်စေသောပါပြီမယ်လို့.
ပုညဒေါ်စေတီတော်ကနေ 50 ပတ်သက်. ညင်ညင်သာသာ sloping လမ်းဖွင့်ခေါင်းနှင့်သင် Settawya စေတီတော်မြင်ရပါလိမ့်မည်, ထို့အပြင် Sat Taw Yar စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်, သင့်ရဲ့ညာဘက်အပေါ်.